Ungabelana kanjani nge-inthanethi kusuka ocingweni uye kwi-PC noma kwi-Mac | Izindaba zamagajethi
Ungabelana kanjani nge-inthanethi kusuka ocingweni uye kwi-PC noma kwi-Mac
Enye yezinketho esinazo namuhla ukuxhuma i-PC, iMac, ithebhulethi noma iyiphi ikhompyutha kwi-inthanethi ngendlela elula ngqo ukwabelana nge-inthanethi kusuka kudivayisi yethu yeselula. Lokhu bekunzima kakhulu eminyakeni embalwa eyedlule futhi abanye opharetha bezingcingo bakukhokhisile, kepha namuhla kulula kakhulu futhi kukhona opharetha abambalwa ababeka izithiyo endleleni yokukwenza. Namuhla sizobona izinketho eziningi zokwabelana nge-inthanethi kusuka kwi-smartphone yethu kunoma iyiphi idivayisi.
Okokuqala kukho konke ukuthi ube nenguqulo efanelekile yokwabelana nge-inthanethi ngaphandle kwemikhawulo futhi lokho, ngokwesibonelo, esimweni samadivayisi we-Android, kuyadingeka ukuthi ube ne-Android 9 noma kamuva ukuze ukwazi ukusebenzisa le nsizakalo. Endabeni ye-iOS, umkhawulo usethwe kuphela ngucingo opharetha, ngakho-ke kungcono ukuhlola ngqo uma ungaqiniseki ukuthi ungakwazi. Lokho kusho, sizobona izinyathelo zokwabelana ngokuxhumana okubizwa nangokuthi ku-Android "uxhumano olwabiwe", "ukusetshenziswa kwendawo yokufinyelela" naku-iOS "indawo yokufinyelela yomuntu siqu".
1 Yabelana ngoxhumano lweselula usebenzisa i-Wi-Fi ku-Android
2 Yabelana ngoxhumano ngentambo ye-USB
3 Yabelana ngoxhumano nge-Bluetooth
4 Yabelana ngoxhumano lwakho lweselula usebenzisa i-iPhone
5 Xhuma iWindows PC ku-USB Internet Sharing
6 Qaphela ukusetshenziswa kwebhethri
Yabelana ngoxhumano lweselula usebenzisa i-Wi-Fi ku-Android
Amafoni amaningi e-Android angabelana ngemininingwane ephathekayo nge-Wi-Fi, i-Bluetooth noma i-USB futhi kulokhu kufanele sibe nenguqulo ye-Android ebuyekeziwe ngaphezu kokungalinganiselwa yi-opharetha yethu. Siqala ngenketho yokwabelana ngokuxhumana kusuka endaweni yokungena ye-Wi-Fi.
Ukuze senze lokhu kufanele sivule uhlelo lokusebenza lwezilungiselelo ku-smartphone bese uchofoza ku:
Inethiwekhi ne-Inthanethi> Ukwabelana nge-Wi-Fi hotspot / Ukuxhumeka> indawo yokungena ye-Wi-Fi
Chofoza kunketho yendawo yokungena ye-Wi-Fi futhi lapho singaguqula izilungiselelo ezinjengegama noma iphasiwedi. Uma kunesidingo, thepha kuqala Setha i-hotspot ye-Wi-Fi.
Kuleli qophelo singangeza iphasiwedi kunketho "Yezokuphepha". Uma ungafuni iphasiwedi, ungachofoza ku- "Lutho"
Manje usungavula enye idivayisi esizonikezela ngayo i-inthanethi nge-smartphone futhi kufanele simane sithole indawo yokungena ye-smartphone yethu. Uma sine-password siyayengeza futhi uma kungenjalo simane uchofoze ku-Connect. Ungabelana ngemininingwane yefoni yakho namadivayisi angafika kwangu-10 ngendawo yokungena ye-Wi-Fi.
Yabelana ngoxhumano ngentambo ye-USB
Ngokusobala nathi singabelana nge-inthanethi nedivayisi yethu ye-Android ngekhebula le-USB, ngakho-ke le nketho ingathakazelisa futhi ukuthi ingalahli noma yisiphi isivinini kodwa inengxenye yayo engemihle futhi lokho yilokho Ama-Mac awakwazi ukwabelana ngokuxhumana ne-Android ngentambo ye-USB. Uma lokhu sekucacisiwe, sihamba nezinyathelo zokwabelana nge-inthanethi kusuka kudivayisi yethu.
Into yokuqala ukuxhuma i-smartphone kukhebula le-USB. Isaziso esithi 'Kuxhunywe njengo' sizovela phezulu esikrinini
Sivula uhlelo lweZisetho lwefoni yakho bese siyachofoza Inethiwekhi ne-Intanethi > Indawo ye-Wi-Fi / Yabelana ngokuxhumeka
Yenza kusebenze inketho Yabelana ngoxhumano nge-USB
Futhi sesivele singakujabulela ukuxhumana nenethiwekhi ngekhebula. Khumbula ukuthi ama-Mac awahambisani nale nketho ngakho-ke kulezi zimo kungcono ukugxila ngqo kuxhumano lwe-Wi-Fi, engicabanga ukuthi yimina okungcono kakhulu ezimweni eziningi ngoba zixhumene ngqo futhi sidinga qala ngokushesha ukuxhumana nangendlela elula.
Yabelana ngoxhumano nge-Bluetooth
Kulokhu kufanele sixhumanise i-smartphone nenye idivaysi ngokuyilungiselela umamukeli wayo. Le nketho ayitholakali kuwo wonke amadivayisi, ngakho-ke sihlala sincoma ukusebenzisa inguqulo ye-Wi-Fi ukuxhuma amadivayisi, kepha uma ngabe idivayisi yakho ivumela ukuxhumana nge-Bluetooth, ungalandela lezi zinyathelo ezingezansi.
Lapho idivaysi etholwayo isimisiwe ukusungula ukuxhumana kwe-Bluetooth, siyaqhubeka ngezinyathelo
Sivula uhlelo lokusebenza Amasethingi efoni bese siyaqhubeka
Sichofoza inketho Networks and Internet> Wi-Fi Zone / Share connection
Manje chofoza ku-Yabelana ngoxhumano nge-Bluetooth
Futhi ngomumo, ngale ndlela ukuxhumeka kuzokwabiwa nge-Bluetooth.
Yabelana ngoxhumano lwakho lweselula usebenzisa i-iPhone
Kumadivayisi we-iOS Le nketho futhi ilula kakhulu ukuyenza futhi kusobala ukuthi sinethuba lokwabelana nge-inthanethi okutholakalayo. Singakhetha futhi phakathi kokukhetha kwe-Wi-Fi, i-Bluetooth ne-USB, ngakho-ke sihamba nenketho ngayinye. Cacisa lokho kusuka ku I-iPad enomakhalekhukhwini kungenzeka ukuthi wabelane nge-inthanethi.
Siqala ngenketho ye-Wi-Fi yokwabelana ngokuxhumana futhi lokhu kwenziwa ngendlela elula. Sangena Amasethingi> Indawo yokungena yomuntu siqu> Vumela abanye ukuxhuma futhi siyayisebenzisa. Lapha singangeza iphasiwedi ye-Wi-Fi noma cha, ngezansi nje, uma usuqedile, vula idivayisi ukuxhuma bese uchofoza kunethiwekhi ye-iPhone yakho noma i-iPad. Faka iphasiwedi uma kunjalo bese uzulazula.
Xhuma iWindows PC ku-USB Internet Sharing
Lapho imishini yethu ingenayo inketho yokuxhuma nge-Wi-Fi singasebenzisa ikhebula le-USB le-iPhone noma i-iPad. Ngalokhu kufanele sibe ne-iTunes futhi siqiniseke ukuthi i-PC ibona i-iPhone yethu noma i-iPad.
Faka inguqulo yakamuva ye-iTunes kukhompyutha yakho
Ngentambo ye-USB, xhuma ikhompyutha ku-iPhone noma i-iPad enikezela nge-Internet Sharing. Uma utshelwa, thembela idivayisi.
Qiniseka ukuthi ungathola futhi ubuke i-iPhone noma i-iPad ku-iTunes. Uma i-Windows PC ingayazi idivayisi, zama enye ikhebula le-USB
Landela izinyathelo ezinikezwe yiMicrosoft ukubheka ukuxhumeka kwe-inthanethi ku-Windows 10 noma ku-Windows 7
Ukwabelana nge-inthanethi kusekela ukuxhumana kwe-Bluetooth ne-Mac, i-PC namanye amadivayisi avela eceleni, kepha njengoba ngishilo kunguqulo yokwabelana nge-Intanethi kusuka kudivayisi yethu ye-Android, kungcono ukusebenzisa i-Wi-Fi, ngoba kulula kakhulu inqubo.
Qaphela ukusetshenziswa kwebhethri
Ukusetshenziswa kwebhethri ngale ndlela yokwabelana nge-inthanethi kuyinto okufanele uyikhumbule kumadivayisi we-Android ne-iOS. Ngakho-ke singakwazi ukuxhuma idivayisi emandleni isikhathi soxhumano olwabiwe ukuyivimbela ekusebenziseni ibhethri eliningi kakhulu futhi kufanele khubaza ukwabelana ngokuxhumeka uma sesiqedile ukugwema ukusetshenziswa okuningi kunokujwayelekile. Uma i-smartphone yethu ingavimbela indawo yokungena ngokuzenzakalela uma ingekho imishini exhunyiwe, yenza le nketho isebenze ukugwema ukusetshenziswa okungadingekile.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungabelana kanjani nge-inthanethi kusuka ocingweni uye kwi-PC noma kwi-Mac
Ungayisebenzisa kanjani ifoni yakho njengekhamera yewebhu
Ungaphina kanjani ukuvikela iphrofayili yakho uma wabelana nge-akhawunti ku-Netflix